Rohingya Students Forum: February 2018
အာရ်ကာန် နန်းတွင်းစာဆို ပဏ္ဍိတကဝိ အာလာဝလ် [ ၁၆၀၇-၁၆၈၀ ]
ရေးသား 🔰 လူထုဝဏ္ဏ |
အာလာဝလ်သည် ၁၇ ရာစု ထင်ရှားသော အာရ်ကာန် နန်းတွင်းစာဆိုပညာရှိ တစ်ဦး ဖြစ်သည်။ ခရစ်နှစ် ၁၆၀၇ ခုခန့်တွင် ဖရီဒ်ပူရ် ခရိုင်၊ ဖတေအာဘာသ် [ Fatwabad ]ရှိ ဂျလာလ်အဘာသ် ရွာ၌ ဖွားမြင်ခဲ့သည်။ အမည်ရင်းမှာ ဆယာဒ်ရှား အာလာဝလ် [Sayed Shah Alawal] ဖြစ်သည်။ ဖခင်ဖြစ်သူမှာ ဖတေအာဘာသ် ဝန်အုပ် Majlis Kutub ၏ အတွင်းဝန် တစ်ပါးဖြစ်သည်။ ပညာတတ် မြင့်မြတ်သော မျိုးရိုးမှ ဆင်းသက်လာသည်။ အာလာဝလ်သည် သက္ကတ၊ ဘင်္ဂလာ၊ အာရဗီ၊ ပါရ်ဆီ သာသာများ သင်ယူတတ်မြောက်ခဲ့သည်။ စစ်သေနင်္ဂပညာနှင့် အနုပညာဂီတကိုလည်း တတ်ကျွမ်းသည်။
တစ်နေ့တွင် အာလာဝလ်နှင့် ခမည်းတော်တို့သည် စစ်တကောင်းမြို့သို့ ရေကြောင်းမှ ရွက်လှေဖြင့် ခရီးထွက်လာရာ ပေါ်တိုဂီ ပင်လယ်ဓားပြများ၏ တိုက်ခိုက်ခြင်းကို ခံရခဲ့လေသည်။ ခမည်းတော်သည် ဓားပြများ၏ တိုက်ခိုက်ကြမ်းကြုတ်မှု၌ ကျဆုံးခဲ့သည်။ ဒဏ်ပြင်းထန်စွာရရှိနေသာ အာလာဝလ်ကိုမူ အကျဉ်းသားအဖြစ် အာရ်ကာန်သို့ ဖမ်းဆီး ခေါ်ဆောင်ယူလာခဲ့သည်။ အစဦးတွင် သူသည် အခ်ျဝါ (Ashwar) ဘွဲ့နှင့် ဘုရင့် မြင်းထိန်းတော် (သို့) သက်တော်စောင့် အဖြစ် အမှူးထမ်းရသည်။ ပြီးနောက် ဂီတနှင့် ဇာတ်ဝတ္ထုများ သင်ကြားရေး တာဝန်ခန့်အပ်ခဲ့သည်။
သူ၏ ကဗျာဉာဏဗလ ထက်သန်သည့် ဂုဏ်သတင်းသည် အချိန်အနည်းငယ်အတွင်း နန်းတွင်းအထိ ပျံ့နှံ့လာ၍ သူ့ ကဗျာဉာဏ်စွမ်းရည်ကို မြောက်ဦး မင်းဆက် သိရီ စန္ဒြာ သုဓမ္မမင်း (၁၆၄၅-၁၆၅၂) ၏ အတွင်းဝန် ဖြစ်သော စူလိုက်မာန် က အသိအမှတ်ပြုခဲ့ပြီး လေးစားဂုဏ်ပြုလာလေသည်။ သုဓမ္မာမင်း၏ နှမတော်၏ မွေးစားသားဖြစ်သော အတွင်းဝန်ချုပ် မဂံ တဂိုး [Magan Thakur/ Magana]က သူ့အား အထူးချီးမြှောက်ကာ နန်းတွင်း ရာထူးနေရာတစ်ခုကို ပေးအပ်ခဲ့သည်။ အာလာဝလ်သည် အခြား နန်းတွင်းသူနန်းတွင်းသားများဖြစ်သော ဆယာဒ် မူးဆာ(အတွင်းဝန်)၊ စူလိုင်မာန်(ဝန်အုပ်)၊ မိုဟာမတ်ခါန် (စစ်သေနာပတိချုပ်) နှင့် မဂျီလီစ် နဝရာဇ် (ဘဏ္ဍာစိုး) စသည်ကဲ့သို့ နန်းတော်၌ အခါမရွေး ခံစားခွင့် ရရှိခဲ့ သည်။
၁၆၅၉ ခုနှစ်တွင် ဘုရင် ရှားဂျာဟန်း၏ သားတော် ရှားရှုဇာ မင်းသားသည် အပေါင်းအဖော်နောက်လိုက်နှင့် တကွ အာရ်ကာန်သို့ ခိုလှုံခဲ့သည်။ သို့သော် အိမ်ရှင်အစိုးရက သစ္စာဖောက်၍ သူနှင့်တကွ မိသားစု အားလုံး ကို လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်သည့်အရေး ပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်။ အာလာဝလ်ကို ရှားရှုဇာ မင်းသားအား လွတ်မြောက်ရေးကို ကြံစည်ခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲကာ ထောင် နှစ်လနီးပါး ကျခံရသည်။ အလုပ်ကြမ်းဖြင့် ဒဏ်ခတ်ခဲ့သည်။ ပိုင်ဆိုင်မှုအားလုံးကို သိမ်းပိုက်ခဲ့သည်။ နန်းတွင်းထောက်ပံ့မှုကိုလည်း နှစ်ကြာရှည် ဖြတ်တောက်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ဆယ်စုနှစ် တစ်ခုခန့် မိသားစု စားဝတ်နေရေး ကျပ်တည်းခြင်းကို ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ဖြတ်သန်းခဲ့ရသည်။ အလုပ်ကြမ်းဒဏ်မှ လွတ်အောင် ငွေဒဏ်ကို အာရ်ကာန် အတွင်းဝန် သို့မဟုတ် ကာဇီ တစ်ပါးဖြစ်သော သူ့ ပီရ်ဆာပ်သခင် စယာဒ်မာဆွတ် ရှား (ရဟမသွေ) က ကူညီသဖြင့် ဒဏ်မှချမ်းသာခွင့် ရခဲ့လေသည်။ ထိုမှစ၍ သူ့ထံ၌ ခိုလှုံ့ခဲ့သည်။ နောက်ဆုံး ၌ သူ့ပီရ်သခင်က သူ့အား “ကွာဒရီယာ တိုရီကာ” ခိလာဖတ် ဘွဲ့ကို ချီးမြင့်ခဲ့လေသည်။
သူ့ထင်ရှားသော စာပေလက်ရာများမှာ Ragtalnama ၊ Padmavati (၁၆၄၈)၊ Satimayana-Lor-Chandrani (၁၆၅၉)၊ Saptapaykar (၁၆၆၅)၊ Saifulmuluk Badiuzzamal (၁၆၆၉) နှင့် Sikandarnama (၁၆၇၃) တို့ဖြစ်ကြသည်။
"I feel much pain telling my story. Arrived in Rosanga, I became royal horseman.
Let's now compare these verses withapassage taken fiom the prologue of Sati Mayna o Lora Candrani:
"I openly told some griefs of mine. Arrived in Rosanga I became royal horseman.
Saptapaykar နှင့် Sikandarnama တို့သည် နီဇာမီ ဂင်ဇဝီ [Nizami Ganzavi] ရေးသားသည့် ပါရှင် ကဗျာ Haft Paykar နှင့် Sikandarnama ကို အခြေခံ၍ ရေးသားခဲ့သည်။ မဂံတဂိုး ကွယ်လွန်ပြီးနောက် စစ်သေနာပတိချုပ် ဆာယာဒ် မိုဟာမတ် မူဆား၏ အားပေးတောင်းဆိုမှုကြောင့် Saptapaykar လင်္ကာရှည် ကို ရှေးအာရ်ကာန် စကားဖြင့် (ယနေ့ရိုစကား) ဘာသာပြန် ရေးသားခဲ့သည်။ စပ်သာပိုက်ကာ လင်္ကာရ၌ အာလာဝလ်သည် မင်းသား ရှားရှူဇား အာရ်ကာန်သို့ ခိုလှုံခဲ့သည့် အကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။ ၁၆၅၉ ခုတွင် မဂိုမင်းသား ရှားရှုဇားသည် အာကာန်သို့ ခိုလှုံခဲ့သည်။ ၁၆၆၀ ပြည့်နှစ်တွင် အာလာဝလ်အား မဂို မင်းသား လွတ်မြောက် ခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲကာ နန်းတွင်းရာထူးများကို ရုပ်သိမ်းပြီး ဖမ်းဆီးထောင်ချခဲ့သည်။
Tohfa တိုဖာ သည် ယူစွဖ် ရေးသားသည့် ပါရှင်လင်္ကာ Tuhuf-e-Nasaih ကို ကျော့ရိုးယူခြင်း ဖြစ်သည်။ Saifulmuluk Badiuzzamal လင်္ကာသည်လည်း စယာဒ်မဆွတ်၏ ပန်းကြားချက်အရ ပါရှင်ဝတ္တုပေါ် အခြေခံ၍ ရေးသားခဲ့သည်။ သူ့စာပေလက်ရာ အများစုသည် အချစ်မေတ္တာ ဇာတ်လမ်းများဖြစ်ပြီး တိုဖာမှာမူ စုံတောက်ဇာတ်လမ်း/ နိတီကျမ်းပင်ဖြစ်သည်။ ယင်းကို စန္ဒြာ သုဓမ္မာမင်း၏ တောင်းဆိုချက်အရ ရေးသား ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
သူ့ဘဝနောက်ဆုံး အချိန်များကို အာရ်ကာန် အတွင်းဝန် နဝရာဇ်ထံတော်၌ ခစားရင်း ကုန်ဆုံးခဲ့လေသည်။ သူ့ထံ၌ ခစားရင်း Shikondernom (Ahmed Sharif အဆိုအရ) သို့မဟုတ် Dara-Shekondar (Sukumar Sen အဆိုအရ) ကို Eskander-nama ပါရှင်စာအုပ်မှ ဘာသာပြန်ရေးသားခဲ့သည်။ယင်းသည် သူ၏ နောက်ဆုံး စာအုပ်ဖြစ်သည်။ သက်တော် ၆၆-၆၇ နှစ်တွင် ကွယ်လွန်ခဲ့လေသည်။
စာဆို အာလာဝလ်၏ ကဗျာလင်္ကာအဖွဲ့များသည် ထိုခေတ် နန်းတွင်း နန်းမူနန်းရာ ဓလေ့ထုံးစံများ၊ ဘုရင်မင်းမြတ် ဘုန်းတော်များနှင့် ကိုယ်ရေးအတ္တုပ္ပတ္တိကို ထင်ဟပ် ရေးဖွဲ့ထားသည်။ သူ့ ကဗျာလင်္ကာများ သည် စိတ်လှုပ်ရှားခံစားမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေသော ရသနှင့် သုတများ စုံလင်နေသဖြင့် သူ့ကို “ပဏ္ဍိတ ကဝီ’ [Pandit Kavi] ဘွဲ့နှင့် ဂုဏ်ပြုခြင်းခံရသည်။ သူသည် ဘဝတသက်တာ၊ ဉာဏဗလ၊ ကာယဗလ တို့ကို ရင်းနှီးကာ အာရ်ကာန် စာပေလောက တိုးတက်ရေးကို သက်ဆုံးတိုင် ကြိုးပမ်းခဲ့သည်။
ယနေ့ အာရ်ကာန်ကမူ သူ့ကို ဘာသာရေးခွဲခြားဆက်ဆံလျက် မေ့လျော့ထားသော်လည်း ကမ္ဘာကမူ ယနေ့တိုင် အောက်မေ့နေဆဲဖြစ်သည်။ သူ့ကို ဂုဏ်ပြုသည့်အားဖြင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ၌ အာလာဝလ် စာပေဆုကို နှစ်စဉ် ချီးမြှင့်နေသည်။
၁။ Wakil Ahmed. "Alaol". Asiatic Society of Bangladesh.Retrieved: 2014-01-13
၂။ M A Tahir Ba Tha, Islamic Review, 1966
၃။ Alaol Wiki
၄။ Padmavati by Alaol
၅။ Amaresh Datta: Encyclopedia of Indian literature, volume one, pp-128
Labels: ရိုကျော်, poem, well-known
Aññára Kamiyab óiyúm Ekdin
Cót dui cót bosórfán Zalani,
Coi aiccí baf, dada, dadi.
Aró hodun maasum no zaní…2
Bicí haiñdí ar nohaindun
zulúmór ulda abas kúli.
Tui yó deci aññí yó decí
hone goittóu bidecí,
Gulami zindegi ar nogorí…,2
girós boni dillán gorí hiim.
Aññárá kamiyab óiyúm ekdin.4
Allah rosul muúntú raki,
koumor ador dilot gañtí
Duk zulúmór musómoré dónco gorí…2
Becí cóiyí ar nocóiyúm,
itçor juwab di fattór boni,
Tuiyó Arakani aññíyó Arakani
Hone goittóu forbácí,
Zulúm hái hái arnotáki…,2
Lou di loiyum koumor hóq gin…
Báiye báiye azamari,
foóráifélai furan ducmoni,
Aró gorí tuwangor goribor hóborgíri…2
Becí saiyí ar nosaiyúm
aññarár hóq gin dabii gorí.
Tuiyó Rohingya zati aññí yó Rohingya zati,
Hone goittóu Bangali.
Hañdi hañdi ar notáki…,2
suk fusí hazol lagai Arakanor meçi gín.
Aññárá kamiyab óiyúm ekdin.…6
Written by Fáida Halu
Sings by Shah Alom Juhari
Please open the link to Listen songs-
Labels: Gana, poem, Rohingyalish
۞ Gaága ۞
Zodi tor dhak fúni kiyé no ailé
tóu gaága solo ré,
tóu gaága solo ré, gaága solo,
gaága solo, gaága solo, gaága solo ré.
Zodi kiyé hotá nohoór,
óre ore obáiggitá, kiyé hotá nohoilé
Zodi biggúne táke mukfírái, biggúne hafe dhorai_
Túo foran Kúli
O tui muk fúçái tor monor hotá gaága hoóré.
Zodi beggún fíri zargói,
hótarár foñtót zaibar hale kiyé fíri no saár,
Túo, foñtór keñra,
O tui luo maikká rastat nise úñridiza ré
Zodi batti no dehá, óre ore oo obággittá,
Zodi zore tuwáne añdár raite góror duar baníféle_
Tuo, bijilir oine
Nizor vukor duk zolai gaága fooro re.
۞ တကိုယ်တော် ۞
နင့်ခေါ်သံကြားပြီး ဘယ်သူမှ လာဘူးဆိုရင်လဲ…
နင်သာ တကိုယ်တော် လျှောက်လေတော့…
အို ကံကြမ္မာဆိုး…ဘယ်သူမှ နှုတ်မဆက်ဘူး၊
အကုန်လုံး ကြောက်နေတယ် ဆိုရင်လဲ…
ပါးစပ် ပဲ့တင်ရိုက်ကာ စိတ်ထဲစကားတွေကို
အို… ကံကြမ္မာဆိုး၊ အကုန်လုံး ပြန်ခဲ့သော်…
ဆူးငြောင့်ခလုတ်တွေကို သွေးလွှမ်းနေတဲ့ ခြေနဲ့
နင်သာ တကိုယ်တော် နင်းကြေကျော်လွှားလေတော့…
မီးမောင်းထိုးမပြသော်၊ အို… ကံကြမ္မာဆိုး၊
မိုးကြိုးမီးနဲ့ နင့် စိတ်ထဲ သောကတွေ မီးရှုကာ
Jan 10, 2018, 5:59 PM 〔Rohangking〕
۞ Ekla ۞
jodi shobaai thake mukh phiraae shobai kore bhoi—
jodi gohon pothe jabar kale keu phire naa chaai—
۞ Alone ۞
If they turn away, and desert you
Robindranath Tagore ၏ Ekla Cholo ကဗျာ ၏ လေးဘာသာပြန်
Posted by Rohang king at 8:35 AM